Creative Writing » ရှက်လိုက်တာ လက်ကုန်ပါပဲ	16
ဇီဇီခင်ဇော် says: ရှက်လို့
Courage says: အဟိ အဟိ ခွိ
naywoon ni says: ဒါ ဗမာ​တွေရဲ့ မရိုးနိုင်​တဲ့ အလွဲ​လေး​တွေပါ ။ စကားပုံ​တောင်​ရှိသား ငှက်​မသိ ဇရက်​ သူခိုးထင်​ဆိုလား ဘာလား ဘာလား ဘာလား ဗျာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 280
Courage says: ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ… လွဲပဲ လွဲနိုင်လွန့်လွန်လွန်း
Mike says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 280
Courage says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2285
Ma Ei says: မရှက်ပါနဲ့ဟယ်………အရင်ကသူများတွေကို ဓါးပြတိုက်သလို အလှူခံခဲ့တဲ့ ပရဟိတအသင်းဦးစီး ဦးဆောင် သဒ္ဓါတရားထက်သန်သူကြီးဆီကနေ ရအောင် အလှူခံနိုင်တဲ့ ကလေးမလေးတွေကို ချီးကျူးလိုက်ပါနော်….
Courage says: ဟုတ်ပါ့ဗျာ လူကဲခက်ကတော့ တော်တော်ကောင်းတဲ့သူတွေပါ့
သာဓု… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 280
Courage says: တား နိုင်ဂံရေး ကျောဘူးညော်…. အမှန်က ကျွန်တော်တို့နားမှာ မြန်မာလဲနည်းသလို ရှိသမျှတွေကိုလဲ မျက်မှန်တန်းမိပြီးသားဗျ။
Alinsett @ Maung Thura says: ကျုပ်တို့ဆီမှာတော့
Courage says: ဦးချိုတူးဇော်ရဲ့ “ရွံ့”ဇာတ်ကားထဲမှာ “ဆောရီး”ကို “ကန်တော့ပါသေးရဲ့”လို့ ဘာသာပြန်ထားတာတောင် သွားသတိရသွားပြီ…
Mr. Pocket says: အိုရှက်စရာမှတ်လို့ အလှူဆိုတာ စေတနာသုံးတန်ပြတ်မှ လှူရတာလေ… ဟုတ်ဘူးလားဗျ
Courage says: ဒါဆို ကျွန်တော်နဲ့ ဦးအိတ်ထောင်နဲ့က လိုင်းတူဘေးစပ်တွေပဲဗျ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: ရှက်စရာမဟုတ်ပါ
Courage says: ကျေးဇူးပါ